Maraykanka, 01 August 2016
Isniin 1 August 2016
Faahfaahin Ku Saabsan Shirka Yali
Waxaa maalmahan ka socday dalka Mareykanka Shirka Hogaanka Dhalinyarada Mustaqbalka ee Qaarada Africa ee loo yaqaano Yali.
Aabe Muslim ah Oo Khudbad Qiiro leh ka Jeediyey Shirka Dimoqraadiga
Muhaajir muslim ah ayaa shirka Dimoqraadiga ee magaalada Philadelphia lagu soo geba gebeeyey xalay ka jeediyey khudbad dad badan ay ugu yeereen inay ahayd tii ugu qiiradda badneyd.
Mareykanka oo Ka Walaacsan Xaaladda Turkiga
Mareykanka, ayaa ka walaacsan xaaladda dalka Turkiga, kadib markii Ankara ay sii laba jibbaartay inay beegsato kooxaha lagu eedeynayo inay afgambigii dhicisoobey qeyb ka ahaayeen iyo tagaeerayaashooduba.
Warbixin: Xaaladda Soomaalida Cleveland
Magaalada Cleveland ee gobolka Ohio, waa magaallo ay dagan yiihiin Soomaali ka badan 350 qof oo isagu jira kuwa halkaasi daganaa muddo dheer iyo waliba kuwa cusub.
Obama oo Ku Baaqay in la Doorto Clinton
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sharxay sababta uu u maleynayo in Hillary Clinton ay mudan tahay inay xafiiska kala wareegto bisha January, isaga oo sheegay inuusan jirin nin ama haweeney uga diyaarsan Hillary xilka madaxtinimada.
Qudbadihii Xalay Laga Jeediyay Shirkii Dimuqraaddiga
Shirweynihii xisbiga Dimoqraadiga ayaa maanta galaya maalibtiisii ugu dambaysay, habeenkii xalay ahaana waxaa laga jeediyey khudbado culus.
Xisbiga Dimuqraaddiga, ayaa si rasmi ah u magacaabay in xog-hayihii hore ee arrimaha dibadda Hillary Clinton ay noqoto musharaxa madaxtinnimo ee xisbigaasi u matali doona doorashada madaxtinnimo ee sanadkan ka dhici doonta Mareykanka.
Maalinta 2-aad ee Shirweynaha Dimoqraadiga
Shirweynaha Qaran ee Xisbiga Dimuqraaddiga oo afar maalin socon doona ayaa xalay ka furmay magaalada bariga Mareykanka ku taala ee Philadelphia.
Shirkii Dimuqraaddiga oo Philadelphia ka Furmey
Xisbiga Dimuqraaddiga, ayaa shirkooda qaran oo afar maalin socon doona uga furmay magaalada bariga ku taalla ee Philadelphia, si ay u muujiyaan midnimo xisbiga dhexdiisa ah.
Furitaanka Shirweynaha Xisbiga Dimoqraadiga
Toddobaad kadib markii uu soo xirmay shirkaweynaha xisbiga Jamhuuriga waxaa indhaha caalamku u jeedsanayaan dhinaca shirweynaha xisbiga Dimoqraadiga oo galabta ka furmaya Philadelphia.
Toogasho ka Dhacday Florida oo 2 Qof Lagu Dilay
Toogasho ka dhacday baar lagu caweeyo oo ku yaalla gobolka Koonfurta Bari ee Mareykanka ee Florida ayaa lagu dilay laba qof.
Waa Nin Noocee ah Tim Kaine?
Musharaxa xisbiga Dimoqraadiga dalkan Maraykanka Hillary Clinton ayaa u xulatay Tim Kaine oo ah Senator laga soo doorto gobolka Virginia inuu noqdo madaxweyne Ku-xigeenkeeda.